Dhadhaab: hoggaamiyeyaashu waa in aaney guul-darro u keenin xerada qaxootiga ee dunida ugu weyn
Geneva, 1 Oktoobar 2012. Toddobaadkan, hoggaamiyeyaasha dowladaha ayaa ku kulmaya munaasadda 63aad ee Guddiga Fulinta ee UNHCR, halka Dhadhaab, oo ah xerada xaqootiga ee ugu weyn dunida, ay qaxootiga Soomaaliyeed weli ku nool yihiin xaalado adag oo ay u sii dheer tahay cabsi. Ururka caafimaadka ee caalamiga ah Médecins Sans Frontières (MSF) ayaa Dalalka Qaybta ka ah Heshiiska Qaxootiga ugu baaqey in ay si buuxda ula shaqeeyaan Dowladda Kenya ee qaxootigan martigelisey iyo UNHCR si ay markaa uga soo bixi karaan mas’uuliyadaha kaga aaddan qaxootiga Dhadhaab. Tallaabooyin xooggan oo lagu sii wanaajinayo ilaalintooda iyo gargaarkooda ayaa ay waajib tahay in hadda la hirgeliyo. “Waxaan su’aal weyn ka qabtaa heerka gargaarka la siiyo qaxootiga,” ayaa uu yiri Bruno Jochum, oo ah Agaasimaha Guud ee MSF, oo toddobaadkii la soo dhaafey booqdey xerada Dhagaxley ee ka tirsan xerooyina Dhadhaab. “Iyada oo xaaladaha ammaanku ay sii xumaanayaan, ayaa adeegyada aasaasiga ah iyo bixinta gargaarku ay aad hoos ugu dhaceen mana ahan mid lala yaabo in qaxootigu ay haddana mar kale ka dhex dillaaceen cudurrada daacuunka iyo hepatitis E.”
MSF waxaa ay sidoo kale aad uga xun tahay in qaxootigu aaney helin ilaalin ku filan. “Xaqiiqada ah in qaxootiga dhowaan yimid aan la diiwaan-gelin ma ahan mid la aqbali karo, waana caddahay in ay tahay xadgudub lagu xadgudbey heshiisyadii qaxootiga iyo mucaahaddooyinka caalamiga ah,” ayuu hadalkiisa raaciyey Jochum. “Waxaan dhiirrigelineynaa wadahadallada socda ee lagu xallinayo arrintan muhiimka ah ee ay arrintan ka wada leeyihiin Dowladda Kenya iyo UNHCR. Diiwaangelintu waa in si degdeg ah dib loogu bilaabaa.” Maaddaama ay Soomaaliya weli ka jiraan iskahorimaadyo hubeysan, ayaa arrinta ah in dad badan dib loogu celiyo dalkooda ay noqoneysaa mid laga hordhacay. Xaaladaha ammaanka ee dhulka ka jira ayaa ah kuwa aan suuragelineynin ilaalin habboon ama gargaar gaarsiin.
MSF waxaa ay ku baaqeysaa in si degdeg ah dib loogu furo diiwaangelinta qaxootiga cusub iyo in la hirgeliyo siyaasado lagu ballanqaadayo ilaalintooda. Waa in sidoo kale la qaadaa tallaabooyin degdeg ah si loo kaafiyo baahiyaha aasaasiga ah ee qaxootiga, gaar ahaan baahiyaha hoyga iyo fayadhowrka. Waa in wanaagga qaxootiga Dhadhaab ay muhiimad siiyaan Dalalka Qaybta ka ah Heshiiska Qaxootiga. MSF waxaa ay hawshiisa waddaa cusbitaal 200 sariirood qaada oo ku yaalla Dhagaxley, oo ka mid ah shanta xero ee qaxootiga ee Dhadhaab la isku yiraahdo. Shaqaalaha MSF waxaa ay sameeyaan celcelis ahaan 14,000 la-talin caafimaad ah bil kasta waxaana ay seexiyaan 1,000 bukaan oo ka kala tirsan qaxootiga iyo bulshooyinka degaanka martigeliyey. Cusbitaalku waxaa uu bixiyaa daryeelka dadka waaweyn iyo carruurta, daryeelka umuliha, qalliin iyo daaweynta HIV/AIDS-ka iyo qaaxada. MSF waxaa ay sidoo kale hawshooda waddaa afar rugo caafimaad oo ku yaalla Dhagaxley, kuwaas oo bixiya daryeel caafimaad oo ay ka mid yihiin daryeelka ka horreeya dhalidda, tallaalada iyo daryeelka caafimaadka dhimmirka. Hal sano ka hor, bishii Oktoobar 2011, laba shaqaalaha MSF ka mid ah, Montserrat Serra iyo Blanca Thiebaut, ayaa laga af-duubey xerada qaxootiga Dhadhaab iyaga oo gargaar caafimaad oo degdeg ah siinaya dadka Soomaaliyeed. Ilaa hadda waa la haystaa, waxaana MSF, in kasta oo ay sii waddo wax ka qabashada dhibaatooyinka ba’an, ay joojisey in ay mashaariic aan degdeg ahayn ka furto Soomaaliya gudaheeda ilaa laga sii daayo.